Ogaden News Agency (ONA) – Doorashooyinkii Ethiopia Maxaa Inooga Baxay! Warbaahinta caalamka iyo Adduunku Maxay ka dhaheen
Doorashooyinkii Ethiopia Maxaa Inooga Baxay! Warbaahinta caalamka iyo Adduunku Maxay ka dhaheen
Waxaan kor marayna Doorasho ku sheegtii ka dhacday Dalka Ethiopia, Ma Cadaalad bay aheyd!, Adduunku Siduu u arkay!, Natiijada iyo Cawaaqibta kasoo socota maxay noqon doonaan.
Sidaan aragnay waxaa TV-yada iyo Saxaafada Ethiopia aad looga soo daayay muuqaalo tusinaya inay socoto Doorasho loogu tartamayo dalka Ethiopia. Doorashadaas waxay usocotay si nidaam xasiloon oo wax daggaal ah oo dhibaato ah la inagama tusin TV-yada ama warbaahinta ku hadasha Afka Gumeysiga. Waxaa la isku wada raacay in doorashadaas ay ku dhacday si nabadgalyo ah oo xassiloon codkiina waa la dhiibtay
Nabad Galyo ah oo Xasiloon? dad-baa la xidhay ama la dilay maxaa loo lahaa Marka!
Dabcan kama hadlayno boqolaalka ardeyda ah iyo kumanaanka shacabka ah ee la xidhay loogana shakiyay inay argagaxiso yihiin khal-khalna galin karaan nidaamka doorashada. waxaa taliska Ethiopia uu jeelka dhigay mudadii doorashada dalkan socotay dad tiradooda aan la qiyaasin balse ka badan 10,000 kuwaasoo u badan ardeyda Jaamacada Dhulka Oramada dadka looga shakisanaa inay yihiin dadka u ololeeya xisbiyada mucaaradka iyo cidkasta oo looga shakisnaa innuu lug ku lahaa ururada hubeysan sida OLF, ONLF iyo Gibot 7. Waxaa kale oo la xidh xidhay suxufiyiintii looga cabsi qabay inay wax ka gadisan saxaafada afka gumeysiga ku hadasha ay qoraan.
Dabcan lagama hadlayo Dadkii ku jiray tartanka xubinimada Baarlamaanka u ordayay ee Doorashadii maalmo ka dib la khaarajiyay kuwaas oo muhiimadii laga lahaa ay dhamaatay. Gumeysiga Ethiopia waxa uu dilay 2 Musharax iyo 3 kale oo u taagnaa ama u ordayay xubinimada Baarlamaanka Dalka Ethiopia. kuwaas oo dilkoodii sabab looga dhigay markii ay soo bixi waayeen inay bilaabeen kacdoon siyaasadeed oo ay taagerayaashooda ugu sheegayaan in codkoodi la gudbinin loogana shubtay. Si hadaba tusaale looga dhiggo musharixiinta kale ee laga guuleystay hadday kacdoon isku dayaan in sida musharaxiintan oo kale la leynayo. midaas oo ay ku quus qaataan.
Taliska Woyaanaha Ethiopia waxa uu xidhay masuuliyiintii Xisbiga mucaaradka Samayaawi Party oo loo diiday inay booqdaan ama ay ka qeyb qaataan aaska musharxiintii la laayay ee ka tirsanaa xisbigoda. Taliska Ethiopia waxa uu sheegay hadii dadkaas la laayay loo sameeyo aas ay kasoo qeyb galaan siyaasiyiinta ururada mucaaradku waxa uu noqonaya aas Qaran, waxaana suurto gal ah in halkaas kacdoon ka bilowdo lamida ah kacdoonkii Papua New Guinea ee looga soo horjeeday wadanka Indonesia.
Adduunweynuhu doorashadan Maxuu ku tilmaamay
Doorashadan oo guushu raacday Xisbiga EPRDF/TPLF waxaa la sheegay inay ku guuleysteen 546 kursi iyada oo wali uu dhimanyahay hal kursi oo wali codkiisa la tirinin midkaasna lagu wado inay ku guuleystaan xisbiga talada haya dalka Ethiopia ee EPRDF/TPLF. Sidaas awgeed waxay ku guuleystteen dhamaanba kuraastii baarlamaanka dalka Ethiopia oo ahaa 547 kursi.
Wadamada Ree galbeedka oo jecel waxa lagu magacaabo shaatiga Democracy, waxay aad uga niyad jabeen doorashadii ka dhacday dalka Ethiopia. Wadamada ree galbeedku waxay hadiyo jeer u janjeedhaan dalka Ethiopia oo ay ceebtooda u qariyaan sidaas oo ay tahay, Niyad jab weyn ayay ku riday wadamada ree galbeedka oo in muddo aheydba u ololeynayay in Ethiopia qaadato Democracy Doorashada 2015 ay soo saaraan xubno cusub oo Baarlamaan ah oo sita magacyo Xisbiyo ka gadisa EPRDF. Ethiopia waxay u sheegtay wadamada ree galbeedka in EPRDF yahay xisbiyo kala gadisan midaasna waa la isku mari waayay, waxayna abuurtay in Doorashadii 2015 wadamada ree galbeedku gaar ahaan Midowga Yurub iyo USA ay cuna qabateeyaan una dirin kor meerayaal. Ethiopia dhagaha ayay ka fureysteen waxayna ku adkeysteen in xisbi mucaarad ah uusan kasoo bixin dalka Ethiopia.
Ethiopia iyo Wadamada ree galbeedka waxaa arrintan abuuri doonta in wadamada ree galbeedku ay si fiican u dhageystaan xisbiyada mucaaradka ah ee wadanka dibadiisa ku sugan. Guriga Baarlamaaka Europe iyo Washingto DC waxaa markiiba lagu qabtay shirar waaweyn oo caalami ah oo lagu canbaareynayo Doorashada Dalka Ethiopia midaas oo la rabo in la tuso dalka Ethiopia in kalsoonidii lagala noqon doono. Sidaas oo ay tahay wadamada ree galbeedku wali waxay rajo ka qabaan dalka Ethiopia oo danahooda gaar ah ay ku wataan, midaas oo waqtiyadan dhow ka maarmi doonin. Ethiopia waxay wadamada ree galbeedka u qabata shaqooyinka la daggaalanka waxay ugu yeedho argagaxisada ka jirta Somalia iyo Daggaalka Sokeeya ee ka jira South Sudan.
Wadanka UK waxa uu soo saaray warbixin uu ku sheegayo in uu la qabo midowga Yurub cabashada ku aadan doorashada Ethiopia, sidoo kale mareykanku waxa uu soo saaray innuu soo dhaweynayo in daggaal iyo rabshado waaweyn ka dhicin doorashadii Ethiopia. Midaas oo muujinaysa xidhiidhka xumaaday ee Ree galbeedka iyo Ethiopia ee ku aadan dhinaca Democracy.
Haayadaha Xuquuql Insaanka Amnesty International ayaa sidoo kale soo saarty warbixin dheer oo kaga hadleyso tacadigii ka dhacay Doorashooyinkii Ethiopia.
Maxaa ka dhalan doona
Ururada mucaaradka ah ee Ethiopia oo hada ka hor taageero buuxda ka heysan wadamada ree galbeedka ayaa ku qanciyay wadamada ree galbeedka in taliska Woyanah Ethiopia xabad mooye rajo kale uusan laheyn, waxaaana si buuxda u bilowday ololihii xisbiyada mucaaradka Ethiopia isku hubeynayeen, iyaga oo ilaalinaya amniga naftooda oo khatar badan soo food saartay kadib markii la khaarijiyay dhamaanba kuwi ugu koodka roona. Waxaa dibada u baxay mucaaradkii iyo siyaasiyiintii Ethiopia waxayna ku biireen ururada hubka sida Sida OLF iyo Ginbot 7 iyo ururada kelee ee la daggaalama.
Jabhada ONLF oo ah urur u daggaalama aayo ka tashiga dhulka Ogadeniya ayaa la filayaa inay hoogaamiso ururada hubka sida ee ladaggaalamaya gumeysiga Ethiopia.